Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): February 2013
တစ်နိုင်ငံလုံး ကာမလှုံ့ဆော်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးနေသော်လည်း တောင်ကြီးတွင် ရောင်းမြဲ ရောင်းချလျှက်ရှိနေ
By ဖိုးဇေ (တောင်ကြီး) | ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများအပါအ၀င် နေရာအနှံ့အပြားတွင် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ အတုယူ မမှားစေရန်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ တိုးတက်စေရေးအတွက် ကာမဆန္ဒလှုံ့ဆော်စေသည့် ဆေးဝါးပစ္စည်းများအား လိုက်လံဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများ ပြုလုပ်နေလျှက် ရှိသော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့တွင်မူ လူစည်ကားရာ နေရာဖြစ်သော ညဈေးတန်းနေရာတွင် ရောင်းချနေလျှက်ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
By Kanbawza Win | February 21, 2013
How can it be possible to giveadead man (assassinated in 1947)asecond chance? No! It was to his ideas and vision that the Union of Burma was born on 12 February 1947 just before his untimely dead when the ethnic nationalities joinamajor ethnic group call themselves as Burman now call Myanmar to take independence from Britain soon after the 2nd World War.
ဆီဆိုင်မြို့တွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ပွဲတော်ကျင်းပ
By ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့တွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သည့် (၆၆) နှစ်မြှောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခန်းအနားတရပ်ကို ၁၂၊ ၂၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
‎ကဗျာဆရာစောဝေ ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ ပြည်ထောင်စုနေ့ အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
"ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုပြီး နွားကျောင်းသားလိုပဲ ကျောင်းတဲ့နွားကိုလည်းမပိုင်၊ လူ (၂) သိန်းလောက်မှာမှ အထက်တန်းကျောင်း (၄) ကျောင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတဲ့၊ ရယ်ရတယ်"
By Kanbawza Win | February 13, 2013
The Myanmarnize word of the Shan word “Panglong” is “Pin Lone” as the current regime makeaconcerted drive to cleanse the ethnic nationalities of the Non Myanmar such as changing not only the name the country but also eliminating the name that has the ethnic origin. The country has celebrated its 66th anniversary of the founding of the Union of Burma; it seems that the regime is making an attempt to cajole the Non Myanmar race to agree to its dictated concordat which they will organize very soon.
By မင်းကုသ | ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ ကမ္ဘောဇပန်းခြံ၊ မြို့မဈေးကြီး အပေါ်ထပ်၊ မြကန်သာပန်းခြံနှင့် မြသုခရုံ အပေါ်ထပ်တို့တွင် ကလေးကစားကွင်းအမည်ခံကာ လောင်းကစားမှုများ အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၂၂) ရပ်ကွက်ရှိသည့်အနက် ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ကံသာရပ်ကွက်၊ ဟော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်၊ ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကန်ရှေ့ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဦး၊ ညောင်ဖြူစခန်းရပ်ကွက်၊ ရတနာသီရီရပ်ကွက်နှင့် နေရာအတော်များများတွင်လည်း “ပန်းသီးဂိမ်း၊ ငါးပစ်ဂိမ်း၊ ကာစီနို” စသည်ဖြင့် လောင်းကစားဂိမ်းဆိုင်အငယ်များမှ စခန်းမှူး၊ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင်၊ အပိုင်နယ်ထိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး အခကြေးငွေပေးဆောင်ကာ ဖွင့်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by Taunggyitimes 10 comments
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၃
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရဲချုပ်ကြီးသိရှိနိုင်စေရန် အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အကြောင်းအရင်းများအား တစိတ်တပိုင်းသိရှိနိုင်ရန် ပြည်သူတစ်ဦးနေဖြင့် အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သည် တောင်ကြီးမြို့ အမှတ် (၁) ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် ကွန်ပျူတာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်
ကိုယ်ပိုင်အမှတ် လ ၂၀၈၆၄၀ ရဲတပ်သားကျော်ရွှေလင်း ဖြစ်ပါတယ်။
By Karin Finkelston, Axel van Trotsenburg, and Michel Wormser | Tuesday, 09 February 2013
The people of Myanmar have been in the dark for too long. It's time to turn the lights on. Of the nearly 60 million people living in the country, three out of four are without reliable access to electricity. No power means that children cannot study at night, people cannot runabusiness during the day and clinics cannot refrigerate medicines vital for the population's health.
By Kanbawza Win | February 8, 2013
The Burmese regime insistence on the use of word Myanmar over Burma in the English language reveals the highest stage of their ethnic cleansing policy implemented by the Divide and Rule policy over the Non Myanmar, the ethnic nationalities, which constitutes more than half of the population of Burma when the modern Union of Burma was formed in 1947.
တောင်ကြီးမြို့ယာဉ်နှင့်လမ်းစည်းကမ်းအပေါ် ပြည်သူတစ်ဦး၏အမြင် အပိုင်း (၁)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၃
တောင်ကြီးမြို့တွင်နေထိုင်ကြပြီး ယာဉ်မောင်းသူများ၊ ဆိုင်ကယ်စီးသူများအား ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ယာဉ်စည်ကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို ပြည်သူများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်းရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီး ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
တောင်ကြီးမြို့တရားရုံးမှ ထူးဆန်းသောအမှုကြီး (အပိုင်း-၂)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က "တောင်ကြီးမြို့တရားရုံးမှ ထူးဆန်းသောအမှုကြီး" ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အခု အဲဒီအမှု (ပြစ်အမှတ် ၄၆၆၈/၂၀၁၀) နဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားလိုမြေးလုပ်သူ ခွန်သီဟန်က တစ်အိမ်တည်းနေ ကျေးဇူးရှင် အဖိုးအရင်းကို ထောင်ကျအောင် ရဲ၊ ရှေ့နေတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဘယ်လိုကလဖန်ထိုးသလဲဆိုတာကို သက်ကြီးရွယ်အို မိဘ ဘိုးဘွားတွေ၊ တစ်နေ့ မိဘ ဘိုးဘွားဖြစ်လာမယ့်သူတွေကို သတိပေးချင်လို့ ဒီစာတမ်းကို ရေးသားလိုက်ရတာပါ။
The KIO Statement on Current Situation of War in Kachin State